बसन्त थापा, अमेरिका
महाकली नदि थुनियो राम्रै भयो या यसले नयाँ सन्देश दियो भारत र नेपालका शाषक तथा जनतालाई । भारतले बाध बनाएर प्राय सबै पानी भारत लगेर सिंचाई र खानेपानीको व्यवस्था गर्ने नेपालको खेत र वस्ति सुख्खा र काकाकुल रहने । कोशी, गण्डकी, त्रिसुली, राप्ती, अरूण, तम्मोर, बागमति, नख्खु, गोदावरी, कोड्कु, मेलम्ची लगायत धेरै हिमनदि र झरना छहराहरूका पानी नेपालमा प्रयोग र उपयोग नभएर भारततिर बग्दै समुन्द्रमा मिसिन्छन् तर ती हिमनदी, खोला, झरना, छहराहरूलाइ आजका दिनसम्म प्रयाप्त र सही हिसाबमा व्यवस्थित गर्न कुनै व्यवस्था र शाशक संक्षम, सफल र चासोमय बन्न सकिरहेका छैनन् । ती नदि, खोला, झरनाहरू देशभरका वस्ती र जमीनमा सिंचाई र खानेपानीमा लगाउन सकिन्छ । यसको लागि सुरक्षित ठाउँमा बाँध निर्माण गरेर । अनावस्यक पहाड मासेर, सुरूङ्ग बनाएर, ठुला–ठुला पाइप बिच्छ्याएर पानीको प्रयोग र सदुपयोग गर्न सकिन्छ । पहाड र खोचहरू नागां र बाझा छन्, त्यहाँ रूख, फलफूल, पशुपालन, जडिबुटी, खेतीपातीका काम गर्न सकिन्छन । अरब र मलेसिया जानै पर्दैन । तराइ, मधेश र उपत्यकाहरूमा ठूला साना नहर बनाइ पानीको व्यवस्था गराइ फार्महरू, उद्योगहरू, नयाँ–नयाँ शहरहरू बसाउन/बनाउन/चलाउन सकिन्छन् । युरोप र अमेरिका जानै पर्दैन । जहाँ गए पनि आखिर गर्ने दुःख र मिहिनेत नै हो ।
पूर्वको अरूण तमोर खै कहा बगेर जान्छ ! कोशी–गण्डकी बगेर खै कता मिल्दछ ! मेलम्ची त्रिशुली राप्ति, महाकाली खै कता गएर हराउछन ! बागमति, मनोहरी, कोड्कु, गोदावरी, नख्खु, टुकुचा, धोवी खोलाजस्तै साघुरो, मिचिने, थिचिने, निजी हुने र पानीबिहीन हुने स्थितीमा पुगिसके । बगरहरू, घर, पर्खाल, सडक, पार्कहरूमा बदलिदैछन् । एकहप्ता लगातार ठुलो पानी पर्यो भने सडक नदि बन्छ । घर, वस्ति, स्कुल, उद्योग जलाम्य र हिलाम्य बन्छन् । पानी फैलिएर जम्मा हुने, जमीनमा सोसिएर जाने, सहज निकाश हुने अवस्था सायद आज छैनन् । ठूलो क्षति र घटना नघटेसम्म सायद नदि, बगर, खुला जमिन, ठूला सानापोखरी, कुलो, नहर किन चाहिन्छन् सायद राज्य, सरकार र नागरिकको यसमा चासो कमै गएको छ । प्राकृतिक खोला र ताल मात्र होइन् मानव निर्मित नदि, ताल, ढल, पोखरी, नहर सायद ठूला पूराना शहरहरूले एकदिन आवस्यक ठान्ने छन् र निर्माण गर्न बाध्य हुनेछन् किनकि विश्व वातावरण र मौसम डरलाग्दो गरि बदलिदैछ । घनावस्ति र जनसंख्या सानो क्षेत्र र शहरहरूमा मानव र प्रकृति बिरोधी बन्दै गइरहेको छ । कोभिड जस्तो घातक र सक्रमित रोग र भाइरस घनाबस्ति र जनसंख्या भएको ठाउँमा बढी क्षति हुने गरि देखिइसकेको छ । न्यूर्योक र इटालीले ठूलो क्षति, चोट, पीडा र समस्या भोग्न बाध्य भएको कारण घनावस्ति र जनसंख्या नै प्रमुख हो । त्यसैले पातलो र फराकिलो वस्ति र जनसंख्या अबको आवश्यकता हो ।
नेपालका पहाड, हिमाल, तराई मधेशतिर अब नयाँवस्ती, शहर र हरेक किसिमको पहुँच र व्यवस्था बनाउन अबका राज्य, सरकार र नागरिकहरू लाग्नुपर्दछ । पूराना शहर र सदरमुकामतिर मात्र होइन पुराना शहर र घनावस्ति भएका ठाउँबाट नेपालका हिमाल–पहाड–तराइ मधेश, भारत र चीनका सिमाना र नयाँ नाकातिरका खुला जमिन, डाडा र फाटतिर नयावस्ति, शहर, उत्पादन, उब्जनी, पालन, अस्पताल, सरकारी कार्यलय, स्कुल, कलेज, नहर, खोला, ताल, पोखरी, सडक, रेलमार्ग, एयरपोर्ट बनाउने खुलाउनेतिर आजका स्थानीय र संघीय राज्यका अंग, सरकारहरू र सचेत नागरिकहरूले आफूलाइ बदल्ने र नयाँ परिणाम तथा व्यवस्था बनाउनेतिर लागि हाल्नुपर्ने देखिन्छ । होइन भने सधैको समस्या, असुविधा र सामुहिक आघात र काल (मृत्यु) नेपालीहरूले सधै भोगिरहनु पर्नेछ ।
सत्ता भन्दा सुविधा ठूलो हो जनताको लागि । राजनैतिक परिवर्तनहरू भन्दा दैनिक जीवन परिवर्तन ठुलो हो जनताको लागि । सायद शाषक र नेताहरूले यो व्यवस्था नगरेसम्म । सायद जनताहरूले यो यथार्तता नबुझे सम्म नेपाल अस्थिर र दरिद्र रहि रहन्छ । बलिदान र आन्दोलन खेर गइ रहन्छ । सायद आजको राजनीति, व्यवस्था, संविधान, सरकार, दलहरू जस्तै वस्ति र जमिनहरू पनि आउने पुस्ताको लागि प्रयाप्त हुने छैनन् । सरकार, दल, व्यवस्था, संविधान, आन्दोलन, सहमति आजका नेता र जनताको लागि नियमित, जवरजस्त परिवर्तन र निर्माण गरिएजस्तै आउने पुस्तालाई बाबु आमाको घर, वस्ति, जमिन अपुग र समस्याग्रस्त बन्न सक्छन् । भावी सन्तानहरूको लागि पनि नयाँ वस्तिहरू, जमीनहरू आजका अविभावक र शाषकहरूले व्यवस्थित गरि दिनुपर्छ । सायद चन्द्रमा र मंगल ग्रहहरूको खोज, पहुँच र अनुसन्धान भावी मानव पुस्ताहरूको सुरक्षा र सुविधाकै लागि होलान् ।